သူမကို လိုက်လံ အတုပဆုံး BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်ကို ထုတ်​ဖော်​ပြောကြားခဲ့တဲ့ Lisa | News Bar Myanmar
သူမကို လိုက်လံ အတုပဆုံး BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်ကို ထုတ်​ဖော်​ပြောကြားခဲ့တဲ့ Lisa
BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်​တွေဟာ Lisa ရဲ့ နာမည်ကြီး စကားလုံးတွေကို လိုက်တုပ ​ပြောဆိုရင်း ​ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာ​ဖွေ​ေ​လေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ Lisa ကို လိုက်တုပပြီး အစ​နောက်ဆုံးက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ? ဒါကို ‘Youth With You 3’ ရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ Lisa က ထုတ်​ဖော်​ပြောပြထားပါတယ်။
တရုတ် survival show ‘Youth With You’ မှာ Lisa က mentor အဖြစ်ပါဝင်ထားတဲ့အတွက် သူမနဲ့ အင်တာဗျူး ပြုလုပ်ရာမှာ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူက Sina Entertainment အဖွဲ့သား​တွေက BLACKPINK ရဲ့ variety show ​တွေကို ကြည့်ကြပြီး အဲ့ဒီမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခုကို ​တွေ့ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒါက​တော့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်​တွေက Lisa လို မကြာခဏ လိုက်တုပတာဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူက Lisa ကို လိုက်အတုပဆုံး အဖွဲ့ဝင်က ဘယ်သူလဲဆိုတာကို သိချင်တဲ့အတွက် ​မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ရယ်စရာ​ကောင်းစွာပဲ Lisa က အဖွဲ့ဝင်အားလုံးဟာ သူမကို လိုက်တုပ​ကြောင်း ​ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါ​ပေမဲ့ သူမကို လိုက်အတုပဆုံးက​တော့ တခြားသူမဟုတ်တဲ့ Rosé ပါပဲလို့ ထုတ်​ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ Rosé က သူမရဲ့ ပြုမူလှုပ်ရှားပုံ​တွေကို လိုက်တုပတာမျိုးမဟုတ်ပဲ Lisa ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် စကားလုံးတွေကို လိုက်တုပတာဖြစ်တယ်လို့ ​ပြောထားပါတယ်။ ဒါဆို Rosé ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးစကားက ဘာများဖြစ်မလဲ?
Lisa ရဲ့ ပရိသတ်တိုင်းဟာ သူမရဲ့ နာမည်​ကျော် စကား​တွေထဲက တစ်ခုကို မှတ်မိကြမှာပါ။ ‘Youth With You 2’ မှာတုန်းက သင်တန်းသူတစ်​ယောက်ဟာ သူမ​ဖျော်​ဖြေရမယ့် သီချင်းရဲ့ ကကွက်ကို ​သေချာလိုက်မကနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် Lisa ကို ​တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ Lisa က သူမကို ​တောင်းပန်စရာမလို​ကြောင်း၊ မင်းရဲ့ သူငယ်ချင်း​တွေကိုသာ ​တောင်းပန်ရမှာဖြစ်​ကြောင်း ထိုသင်တန်းသူကို ပြန်​ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး Lisa က အခုချိန်မှာ Rosé ကို တစ်စုံတစ်​ယောက်က “တောင်းပန်ပါတယ်” လို့ ​ပြောရင် Rosé က Lisa ​ပြောခဲ့သလိုမျိုး “ကျွန်မကို မ​တောင်းပန်ပါနဲ့၊ ရှင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း​တွေကိုသာ ​တောင်းပန်လိုက်ပါ” လို့ ပြန်​ပြောမှာဖြစ်တယ်လို့ ​ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီစကားကို Rosé တင်မကပဲ ယခင်က လွှင့်ခဲ့ဖူးတဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုမှာ Jisoo ကလည်း ထိုစကားကို ကိုရီးယားဘာသာနဲ့ လိုက်​ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
Next ပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်နေတဲ့ Thai Channel7မှ နာမည်ကြီးလာတဲ့ကြယ်ပွင့် ၇ ဦး »
Previous « Rosé ရဲ့ solo debut အတွက် ထပ်တူ​ပျော်ရွှင်​အား​ပေးခဲ့ကြတဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်များ